लाहुरे होइन ग्राफिक डिजाईन बने ‘मिलन’ | Jukson
हँसिलो अनुहार भएका पोखरा रामबजारका मिलन थापाले क्यामेरा हातमा लिएको सानैमा हो । सानैदेखि उनको सौख फोटो खिच्नुमा थियो ।
लाहुरे पृष्ठभुमीका मिलनलाई सानोमा ‘म भविष्यमा यस्तो बन्छु’ भन्ने कुनै आईडिया नै थिएन । यद्यपी घरको पृष्ठभुमीका कारणले उनी लाहुरे देखाउन भने गए । तर उनी लाहुरेमा फालिए । खाली समय अब के गर्ने ? तत्कालिन समयमा साईबरहरु खुब चल्थे । भर्खर ईन्टरनेट पुस्ताको चहलपहल शुरु भएको थियो । लाहुरे फालिएपछि उनले साईबर खोले ।
अब फोटोग्राफि, भिडियोग्राफिसँग साईबरको कनेक्शन के त ? यी दुईवटा फरक क्षेत्र हुन् जस्तो लाग्छ । तर त्यस्तो होईन । तर उनले साईबरलाई व्यवसाय सँगै आफ्नो अध्ययन पाठशाला पनि बनाए । फोटोग्राफि, भिडियोग्राफि अनि डिजाईनसम्बन्धि कुराहरुले उनले ईन्टरनेट सर्च गरेरै सिकेका हुन् । साईबरले उनको गोजी पनि भरिदियो र दिमाग पनि भर्दै गयो । भन्छन्–‘साईबर खोलेपछि ग्राफिक सम्बन्धि काम बढि आउन थाल्यो । र, ईन्टरनेट हुने भएकोले मलाई त्यहिँबाट सबै कुरा सिक्न सजिलो भयो ।’
मिलन थापा अहिले पोखराका स्थापित फोटोग्राफर प्लस सिनेम्याटोग्राफर हुन् । उनले ५० वटा भन्दा बढि छोटो फिल्म र म्यूजिक भिडियोहरु खिचिसकेका छन् । लाउरे, एज ब्याण्ड, सम्बृद्धि राई, जि एक्स सोल ब्याण्ड लगाएतका भिडियोहरु उनले खिचेका चर्चित भिडियोहरु हुन् । पछिल्लो पटक उनले खिचेको ¥यापर लाउरेको भिडियोलाई करिब २ लाख बढिले यूट्युबमा हेरिसकेका छन् । उनले खिचेका केहि छोटा फिल्म अन्तराष्ट्रिय फेस्टिभलमा सहभागी भैसकेका छन् ।
फोटो पत्रकारको रुपमा पनि परिचित मिलन पछिल्लो पटक भूकम्पको बेलामा खिचेको फोटोहरुलाई लिएर निकै आशाबादी पनि छन् । उनले भूकम्पको बेलामा खिचेका फोटोहरुको ‘एक्जिबिशन’ गर्ने तयारी पनि गरेका छन् ।
पोखरामा चर्चित वेभसाईट ‘नेप्टिभ्ज डटकम’का संचालक समेत रहेको मिलन निकै राम्रो डिजाईनर पनि हुन् । फोटोग्राफिसँगै त्यसको डिजाईनमा पनि पोख्त मिलनले केहि अन्तराष्ट्रिय ईभेन्टहरुको डिजाईन समेत गरिसकेका छन् ।
२६ वर्षे मिलन केहि नयाँ गर्न चाहन्छन् । जे गर्छन् नयाँ शैलीमा गर्न चाहन्छन् । फोटोग्राफि, सिनेम्याटोग्राफि, ग्राफिक डिजाईन सँगै ईभेन्ट पनि गर्दै आएका मिलनले पछिल्लो पटक आयोजना गरेको ईभेन्ट हो, ‘अल फेशन शो’ र ‘द शो’ । नेपालका चर्चित सेलिब्रिटिहरुले उनले आयोजना गरेको फेशन शोको रन वेमा बिरालो चाल हिँडेका थिए । उनलाई अझै केहि गर्नु छ । भन्छन्–‘यो फिल्डमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त हावी छ । तर मलाई कसैको फुरफुरे कुराले छुँदैन । काम गर्दै जाने हो, सफलता अवश्य हात लाग्छ ।’
नाम जस्तै व्यवहार पनि मिलनसार भएका मिलनको आँट अरु धेरै युवाहरुको लागि मार्गदर्शक बनोस् ।
यस्तो छ सौगात मल्लको ‘लुकामारी’ लुक्स
निर्मलाका हत्यारा प्रकरणः अपराधी भेटिन १२ वर्ष लाग्न सक्छ - प्रधानमन्त्री